Fitsaram-bahoaka tany Befandriana Avaratra : misy tsy naiditra am-ponja fa hoe havan’olona ambony | NewsMada
Fitsaram-bahoaka tany Befandriana Avaratra : misy tsy naiditra am-ponja fa hoe havan’olona ambony
Io indray! Ramatoabe iray koa matin’ny fitsaram-bahoaka tao Mazava Befandriana Avaratra, ny faran’ny herinandro teo. Nahiahian’ny olona ho mpamosavy izy ka niharan’ny fitsaram-bahoaka. Tsy naiditra am-ponja anefa ireo olona nanao fitsaram-bahoaka fa hoe havan’olona ambony ao an-toerana…
Maty tsy tra-drano vokatry ny fitsaram-bahoaka nahazo azy ity ramatoabe iray mipetraka ao amin’ny toerana atao hoe Mazava Befandriana Avaratra. Nolazain’ny olona fa hoe mpamosavy izy ka raikitra teo ny fifanjevoana. Notafihin’ny andian’olona tao an-tranony. Notorahin’ny olona sady nodoran’ny olona ny tranony, saingy tafavoaka ihany izy. Tsy vitan’izay anefa fa mbola nifanenjehan’ireo andian’olona marobe koa izy ka niharan’ny fitsaram-bahoaka avy hatrany.
Niroso tamin’ny fanadihadiana momba ity raharaha ity ny teo anivon’ny mpitandro filaminana. Vokany, olona miisa 11 indray voasambotra. Voalazan’ny loharanom-baovao avy any an-toerana fa hoe misy fianakaviana olona ambony ao an-toerana ireto olona nanao fitsaram-bahoaka ireto. Natolotra ny fampanoavana, ny faran’ny herinandro teo ireo olona voarohirohy ireo ka naiditra am-ponja vonjimaika. Nisy anefa ny fanelanelanana nataon’ny olona ambony iray ao an-toerana, araka fanazavana voaray hatrany. Vokany, olona fito naiditra am-ponja vonjimaika fa votsotra kosa ireo efatra ambiny.
Lasa nahazo vahana mihitsy ity resaka fitsaram-bahoaka ity satria na endrikendrika fotsiny aza dia mety hiafara amin’ny fanaovana fitsaram-bahoaka.